Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao isan-karazany » Io ve no fomba famaranana ny areti-mifindra eto an-tany?
Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
“Roadmap to End Pandemics” no zaraina amin'ireo mpikambana ao amin'ny Antenimiera ao amin'ny Antenimiera ary miantso ny “Fiarovana ny natiora ho vaksinina maharitra maharitra lava ihany”, izay milaza fa ny fomba fanaovana vaksiny ny Tany dia amin'ny alàlan'ny “Fahasalamana Iray”.
Ny parlemantera sasany sy ny governemanta ao amin'ny fanjakana mpikambana ao amin'ny ASEAN dia mibaiko ny fomba iray One Health hisorohana ny areti-mifindra amin'ny ho avy.
Ny fisorohana dia mitentina 0.2 isan-jato amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiomanana amin'ny areti-mandringana isan-taona ary tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny programa "Build Back Better".
"Tondrozotra" navoakan'ny fikambanana 80+ izay mitarika ny governemanta, orinasa, vondrom-piarahamonina ary olona tsirairay momba ny fomba hametrahana vahaolana amin'ny fisorohana ny areti-mandringana.
Fiaraha-miasa manerantany ho an'ny mpitsabo, ny fambolena, ny fahasalamana, ny filaminana, ny fifandraisana ary ny fifandraisana, EndPandemics, dia namoaka tondrozotra niara-niasa mba hisorohana ny areti-mifindra amin'ny ho avy amin'ny fivorian'ny solombavambahoakan'ny Fikambanan'ny Firenena Azia Atsimo Atsinanana (ASEAN) sy ireo firenena mpanara-baovao.
Nandritra ny fiakaran'ny valan'ny virus SARS-CoV-2 manerantany dia nanolo-tena handinika sy hampiroborobo ny paikady mahomby hisorohana ny aretim-pivalanana ary nanaiky ny handinika ny fomba fahasalamana One. “Webinar Executive” momba ny Preventing Pandemics ”manokana dia nokarakarain'ny AIPA niaraka tamin'ny mpiara-miombon'antoka MOU, Freeland ary ny firaisana EndPandemics.
Ny Health iray dia manambatra ny fepetra mifandraika amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ny fahasalaman'ny biby (ao anatin'izany ny biby fiompy sy ny bibidia), ary ny fahasalaman'ny tontolo iainana mba hampihenana ny loza ateraky ny valanaretina pathogen amin'ny loharano niavian'izy ireo. Ny roa ampahatelon'ny aretina mamindra vaovao (ao anatin'izany ny VIH, Ebola, SARS, MERS, ary COVID-19) dia avy amin'ny biby.
Ireo mpanao lalàna sy tompon'andraikitra hafa avy any Brunei, Kambodza, Indonezia, Lao PDR, Malaysia, Filipina, Vietnam, ary koa Kanada, Parlemanta eropeana, Nouvelle Zélande, ary ny Repoblikan'i Korea, no voalohany nandinika sy nifanakalo hevitra momba ny “Roadmap to End Pandemics: Build It Together, ”izay mametraka drafitra manavao ny vahaolana amin'ny fisorohana ny areti-mandringana.
Ny Roadmap dia manolotra rafitra misokatra ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny governemanta, ny orinasa, ny fiarahamonina, ny fiarahamonim-pirenena ary ny olona manara-penitra amin'ny panda 4 voalohany amin'ny fisorohana ny areti-mandringana: (1) mampihena ny fangatahana biby dia, (2) miala amin'ny varotra ara-barotra amin'ny bibidia, ( 3) miaro sy mamerina amin'ny laoniny ny toeram-ponenana voajanahary, ary (4) ataovy azo antoka sy mahasalama kokoa ny toeram-piompiana sy ny rafitra fihinanan-tsika.